[ March 29, 2020 ] နိုင်ငံသာနှစ်ဦးအပူချိန်လွန်ကဲနေသော်လည်း အတိကျ မသိရသေးပဲ စစ်ကိုင်းဘက်သို့ ပြီးစလွယ်ပြန်လွှတ်မိ	NEWS
[ March 29, 2020 ] ထိုင်းမှ ပြန်လာသော အမျိုးသမီး ကျိုက်ထိုဆေးရံတွင် ဖျားနာပြီး သေဆုံး၊ အလောင်းသဂြိုလ်ခွင့်မပေးသေးဘဲ ဓာတ်ခွဲနမူနာ ပေးပို့စစ်ဆေးနေ	NEWS
[ March 29, 2020 ] တမာရွက် ရဲ့ထူးကဲတဲ့ အာနိသင်များ	HEALTH
[ March 29, 2020 ] အင်းစိန်က စောင့်ကြည့်လူနာ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ထဲကို တိမ်းရှောင်	NEWS
[ March 29, 2020 ] ချဉ်ပေါင် ၏ ကျန်းမာရေး လျို့ဝှက်ချက်	KNOWLEDGE
[ March 29, 2020 ] သင့် အသည်း ကို သဘာဝ အတိုင်း ဆေးကြောပေးမယ့် အစားအစာများ	KNOWLEDGE
[ March 29, 2020 ] ဝမ်းဗိုက်ကအဆီကျစေပြီး ခါးသွယ်စေမယ့် (၉) မိနစ်စာ လေ့ကျင့်ခန်း	KNOWLEDGE
[ March 29, 2020 ] ငါးရက် အတွင်း ပွေး ညှင်း တင်းတိတ် ဝက်ခြံ သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း	KNOWLEDGE
[ March 29, 2020 ] လုံးဝတွဲဖက်မစားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာ(၅)မျိုး	KNOWLEDGE
[ March 29, 2020 ] အဆီကြောင့် ဝနေသူများအတွက် အဆီကျစေတဲ့ ကြက်သွန်နီသုပ်	KNOWLEDGE
February 12, 2020 Alinn Pya Comments Off on တစ်ရွာလုံးကုန်လုနီးပါးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ မကွေးတိုင်းကရွာလေးတစ်ရွာကမီးလောင်မှုပုံရိပ်များ
အိုးပြင်မဲ‌ကျေးရွာ မီးလောင်မှုအ‌ခြေအနေ မင်းဘူး၊(စကု)မြို့နယ်မနက်ဖန် အမြန်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ရန်အားလုံးသတင်ပို့ထားပြီအိမ်ခြေ ၅၀ ခန့် မီးလောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိမီးလောင်မှုအခြေအနေပုံရိပ်တွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit – Kyaw Swan Yi တစ္႐ြာလုံးကုန္လုနီးပါးေလာင္ကြၽမ္းေနတဲ့ မေကြးတိုင္းက႐ြာေလးတစ္႐ြာကမီးေလာင္မႈပုံရိပ္မ်ား အိုးျပင္မဲ‌ေက်း႐ြာ မီးေလာင္မႈအ‌ေျခအေန မင္းဘူး၊(စကု)ၿမိဳ႕နယ္မနက္ဖန္ အျမန္ဆုံးကူညီေထာက္ပံ့ရန္အားလုံးသတင္ပို႔ထားၿပီအိမ္ေျခ ၅၀ ခန့္ မီးေလာင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမီးေလာင္မႈအေျခအေနပုံရိပ္ေတြကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ Credit – Kyaw Swan Yi
၁၃ နှစ်သမီးလေးဗိုက်ပူနေလို့ အကိုကဆေးခန်းလိုက်ပြလိုက်ရာ ကိုယ်ဝန်(၆)လရှိနေ
February 12, 2020 Alinn Pya Comments Off on ၁၃ နှစ်သမီးလေးဗိုက်ပူနေလို့ အကိုကဆေးခန်းလိုက်ပြလိုက်ရာ ကိုယ်ဝန်(၆)လရှိနေ
ရက်စက်လိုက်တာ😪😪😪 မော်လမြိုင်မြို့ ကြားအင်းကျေးရွာတွင် ဖခင်ဖြစ်သူမှ သားမယားပြုကျင့်ရာ (၁၃)နှစ်သမီးတွင် ကိုယ်ဝန်ရရှိ။ မော်လမြိုင်မြို့ ကြားအင်းကျေးရွာ မြောက်ခရွန်းရပ်နေ မ-(၁၃)နှစ်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ သတ္တမတန်း သည် ငှင်း၏ အကိုဖြစ်သူ နေထိုင်သည့် တောင်ခရွန်းရပ် ကြာအင်းကျေးရွာသို့ ဖေဖဝါရီ(၄)ရက်နေ့တွင်အလည် သွားရာ အကိုဖြစ်သူမှ မ——၁၃ နှစ်တွင် ဗိုက်ပူနေသည်ကို သတိထား တွေ့ရှိရ၍ ရခိုင်ကုန်းရပ်ရှိ ချမ်းမြေ့ဂုဏ်ဆေးခန်းသို့သွားရောက်ပြသရာ မ ——၁၃ နှစ်တွင် ကိုယ်ဝန်(၆)လရှိနေသည်ကိုသိရှိရသဖြင့် မေးမြန်းရာလွန်ခဲ့သော(၇)လခန့် နေ့ရက်(မမှတ်မိ)နေ့များတွင် […]
ကထိန်လဲမရ အလှူရှင်မဲ့နေတဲ့ ဒီလို ကျောင်းမျိုးတွေအတွက် အလှူရှင်များသိအောင် မျှဝေပေးကြပါနော်
February 12, 2020 Alinn Pya Comments Off on ကထိန်လဲမရ အလှူရှင်မဲ့နေတဲ့ ဒီလို ကျောင်းမျိုးတွေအတွက် အလှူရှင်များသိအောင် မျှဝေပေးကြပါနော်
ကထိန်လဲမရ အလှူရှင်မဲ့နေတဲ့ ဒီလို ကျောင်းမျိုးတွေအတွက် အလှူရှင် ဒကာဒကာများသိအောင် မျှဝေပေးကြပါနော် ဒီသတင်းကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှ Kyaw Zin အကောင့်ပိုင်ရှင် တင်ပြထားချက်အရ အလှူရှင်များ ပေါ်ပေါက်စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တဆင့်ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည် မန္တလေးမှာ သက်တော် ၈၁ ဝါတော် ၃၅ အရွယ်ရှိတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါး တောင်မွှေးတစ်ချောင်းနဲ့ လမ်းလျှောက်အလှူခံ နေလို့ Kyaw Zin အကောင့်ပိုင်ရှင်မှ ဘယ်ကလဲ အရှင်ဘုရားလို့မေးတော့ စစ်ကိုင်းကပါ ဘုရားဒကာကြီးရယ်ဆိုပြီး…. […]
လမ်းခွဲလိုက်ပါပြီလို့ ကြေညာလိုက်တဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေ
February 12, 2020 Alinn Pya Comments Off on လမ်းခွဲလိုက်ပါပြီလို့ ကြေညာလိုက်တဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေ
ပရိသတ်တွေရဲ့ စုံတွဲလိုက်အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲတွေထဲမှာ အဆိုတော်ကျော်ထွဋ်ဆွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်အဆိုတော်မလေး နန်းသူဇာတို့ စုံတွဲလေးကတော့ တစ်တွဲအနေနဲ့ အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ထွဋ်ဆွေနဲ့ နန်းသူဇာတို့ စုံတွဲလေးက တစ်ဦးကို တစ်ဦး နားလည်မှုတွေနဲ့ လက်တွဲလာခဲ့တာဆိုရင် ချစ်သူူသက်တမ်း (၉)နှစ်ကျော်ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ထွဋ်ဆွေနဲ့ နန်းသူဇာတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နားလည်မှုအပြည့်အဝရှိပြီး ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ အချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက Idol Coupleအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကို ခံရတဲ့ အတွဲလေးတစ်တွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလောမှာတော့ ကျော်ထွဋ်ဆွေက သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နာကနေ “လမ်းခွဲလိုက်ပါပြီ။ […]
February 12, 2020 Alinn Pya Comments Off on သင်္ချိုင်းမြေတူးရာမှ မြေကြီးထဲတွင်အရှင်လတ်လတ်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်
အိန္နိယနိုင်ငံမှအမျိုးသားတစ်ဦးဟ​​မွေးဖွားပြီးမိနစ်ပိုင်းအကြာသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့သူ၏သမီးငယ်လေးကိုမြုပ်နှံပေးဖို့အတွက်အုတ်ဂူမြေတူးရာမှ မြေကြီးထဲမှမာတောင့်နေသောအရာတစ်ခုကို​ဂေါ်ပြားဖြင့်ရိုက်မိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအရာဟာမြေအိုးဖြစ်နေခဲ့ပြီး၎င်းမြေအိုးထဲမှာမှအသံတစ်ခုထွက်နေခဲ့ပါတယ်၎င်းမြေအိုးကိုရိုက်ခွဲပြီးနောက်မှာတော့ Hitesh Sirohi အမည်ရှိအဆိုပါအမျိုးသားဟာအဝတ်တွေနဲ့ရစ်ပတ်ထားပြီးအော်ဟစ်ငိုကြွေးနေခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ကျွန်တော်သမီးလေးပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့တယ်လို့ထင်မိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ တစ်ကယ့်အသံအစစ်ကမြေအိုးထဲကနေ ထွက်လာခဲ့တာပါဆိုပြီး Hitesh ကပြောပြသွားခဲ့ပါတယ် ။ Hiteshဟာကလေးငယ်ကို​ဆေးရုံသို့ချက်ချင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ကလေးငယ်၏ဆေးကုသစရိတ်ကိုတော့​ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲက ပေးချေပေးခဲ့ပါတယ်အဆိုပါကလေးငယ်၏အသက်မှာ 4ရက်သာရှိသေးပြီးသူမကိုမကယ်ထုတ်မီ 4နာရီကနေ 6နာရီခန့်အထိမြေမြုပ်ခြင်းခံထားခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆရာဝန်များက ကလေးငယ်ကိုကုသပေးခဲ့ကြပြီးကလေးငယ်၏ကိုယ်အလေးချိန်မှာ 2.4 ပေါင်သာရှိပြီးသူမဟာအောက်စီဂျင်အနည်းငယ်ကိုသာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူမအသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်ရကြောင်း​ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ် ။ တာဝန်ရှိသူများကတော့ကလေးငယ်၏မိဘများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးမိဘဖြစ်သူတွေကတော့လူသတ်မှုနှင့်ကလေးငယ်ကိုစွန့်ပစ်မှုတို့အတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်ရဲ့မိဘအရင်းတွေကိုရှာဖွေနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာသူတို့ကအဓိကပါဝင်ပက်သက်နေကြလို့ပါဆိုပြီးရဲအရာရှိတစ်ဦးကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် ။ Credit – သခၤ်ိဳင္းေျမတူးရာမွ ေျမႀကီးထဲတြင္အရွင္လတ္လတ္ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ အိႏၷိယႏိုင္ငံမွအမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟ​​ေမြးဖြားၿပီးမိနစ္ပိုင္းအၾကာေသဆံုးသြားခဲ့ရတဲ့သူ၏သမီးငယ္ေလးကိုျမဳပ္ႏွံေပးဖို႔အတြက္အုတ္ဂူေျမတူးရာမွ ေျမႀကီးထဲမွမာေတာင့္ေနေသာအရာတစ္ခုကို​ေဂၚျပားျဖင့္႐ိုက္မိခဲ့ပါတယ္အဆိုပါအရာဟာေျမအိုးျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး၎ေျမအိုးထဲမွာမွအသံတစ္ခုထြက္ေနခဲ့ပါတယ္၎ေျမအိုးကို႐ိုက္ခြဲၿပီးေနာက္မွာေတာ့ Hitesh Sirohi အမည္႐ွိအဆိုပါအမ်ိဳးသားဟာအဝတ္ေတြနဲ႔ရစ္ပတ္ထားၿပီးေအာ္ဟစ္ငိုေႂကြးေနခဲ့တဲ့ကေလးငယ္ကိုေတြ႔႐ွိသြားခဲ့ပါတယ္႐ုတ္တရက္ကြၽန္ေတာ္သမီးေလးျပန္ၿပီးအသက္႐ွင္လာခဲ့တယ္လို႔ထင္မိသြားတယ္ဒါေပမဲ့ တစ္ကယ့္အသံအစစ္ကေျမအိုးထဲကေန ထြက္လာခဲ့တာပါဆိုၿပီး Hitesh […]
နိုင်ငံသာနှစ်ဦးအပူချိန်လွန်ကဲနေသော်လည်း အတိကျ မသိရသေးပဲ စစ်ကိုင်းဘက်သို့ ပြီးစလွယ်ပြန်လွှတ်မိ
ထိုင်းမှ ပြန်လာသော အမျိုးသမီး ကျိုက်ထိုဆေးရံတွင် ဖျားနာပြီး သေဆုံး၊ အလောင်းသဂြိုလ်ခွင့်မပေးသေးဘဲ ဓာတ်ခွဲနမူနာ ပေးပို့စစ်ဆေးနေ
တမာရွက် ရဲ့ထူးကဲတဲ့ အာနိသင်များ
အင်းစိန်က စောင့်ကြည့်လူနာ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ထဲကို တိမ်းရှောင်
ချဉ်ပေါင် ၏ ကျန်းမာရေး လျို့ဝှက်ချက်
ဒီနေ့မင်းကွန်းမှာ မီနီအိုးဝေအနီရောင်နဲ့ဝင်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ၂ ဦး ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းစက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်တော့ကိုယ်ပူချိန်လွန်ကဲလို့ဆိုပြီးသက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကျန်းမာရေး မာရေးဌာနတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီ အကြောင်းမကြားပဲနဲ့မင်းကွန်းကိုအဝင်မခံပဲ ပြန်လွှတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် စစ်ကိုင်းတမြို့နယ်လုံးရှိဝင်းပေါက်ထွက်ပေါက်တွေတွေပိတ်စစ်ရလို့ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မီးသက်တပ်ဖွဲ့တွေတော်တော်လေးအလုပ်ရှူပ်သွားကြရတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလို ဖြစ်ရပါသလဲ…..?? အဲဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတနာရီခန့်အကြာမှမင်းကွန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကသူရဲ့Facebookစာမျက်နှာပေါ်မှာဒီအကြောင်းတွေကိုပုံ‌တွေနဲ့တကွတင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်အကြောင်းကို တမြို့လုံးကတာဝန်ရှ်ိလူကြီးမင်း‌တွေ သိကြရတယ်။ အရေးပေါ် ဒီနိုင်ငံခြားသား ၂ ဦးကို စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးက‌နေနေရာအနှံ့ပိတ်ဆို့စစ်ရတယ်။သတင်းကတင်တာ နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မီနီအိုးဝေနဲ့အတူ နိုင်ငံခြားသားနှစ်ဦးမတွေ့ရတော့ပဲ စစ်ကိုင်းကနေဘယ်အပေါက်ကထွက်သွားမှန်းမသိလိုက်ရဘူးထိထိမိမိလဲ မစစ်ဆေးရ တော့ပဲထွက်ပြေးလွတ်‌ မြောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့သည် ဘယ်နိုင်ငံက လာမှန်းမသိဘယ်မှာတည်းမှန်းမသိစစ်ကိုင်းမှာ ဘယ်နေရာတွေကိုသွားခဲ့မှန်းမသိရောဂါ ရှိ မရှိ […]
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၉ ထိိုင်းနိုင်ငံမှပြန်လာသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကျိုက်ထုံဆေးရုံတွင် ဖျားနာပြီး သေဆုံးသွားသဖြင့် အလောင်းကို သဂြိုလ်ခွင့်မပေးဘဲ သေဆုံးသွားသော အမျိုးသမီး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို ရန်ကုန်ရှိ အမျိုးသား ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲခန်း NHL သို့ ပေးပို့ စစ်ဆေးထားကြောင်း မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာခင်ဆောင်က ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားသည်။ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လာခဲ့သော အမျိုးသမီးသည် ၎င်း၏ နေရပ်ဖြစ်သော ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ […]
တမာရွက် မှာ ဆေးဖက်ဝင် အာနိသင် တွေရှိတယ် ဆိုတာ လူအများစုက သတိပြု မိကြ ပါတယ်။ တမာရွက် တင် မက တမာခေါက် တွေကို အိန္ဒိယ မှာ အလွန် ထင်ရှားတဲ့ ဆေးဖက်ဝင် ပစ္စည်း အဖြစ် အသုံးပြု ခဲ့ပါတယ်။ အခုအခါ တစ်ကမ္ဘာ လုံးမှာပါ တမာပင်ရဲ့ဆေးဖက်ဝင် အစွမ်းတွေကို သိနားလည်ပြီး အသုံးပြု နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တမာရွက်ကို […]
အင်းစိန်က စောင့်ကြည့်လူနာ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ထဲကို တိမ်းရှောင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရသူနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ အင်းစိန်မြို့နယ်က စောင့်ကြည်လူနာဟာ ဇာတိ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် စနဲကျေးရွာကို မိသားစုလိုက် တိမ်းရှောင်လာတာကြောင့် ဒေသခံတွေက စိုးရိမ်တဲ့အတွက် စနဲဆေးရုံမှာထားရှိပြီး စစ်ဆေး လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိုးမိုးကျော်က ပြောပါတယ်။ “သူ့ကို နေအိမ်မှာ စောင့်ကြည့်လူနာအနေနဲ့ ထားတာကိုမနေဘဲနဲ့ မိန်းမနဲ့ ကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ ရန်ကုန်ကနေ ကားငှားပြီးတော့ သူရဲ့ဇာတိကို ပြန်လာကြတာပေါ့၊ သူတို့က မတ် […]
ချဉ်ပေါင်ပင် တစ်ပင်လုံးကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ချဉ်ပေါင်ရွက်ကို ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ ဟင်းချို ၊ ချဉ်ရည်ဟင်း…စသည့် ထမင်းမြိန် ဟင်းလျာများအဖြစ် စာလေ့ရှိကြပါသည်။ တချို ့အရပ်ဒေသများ တွင် အရွက်ရင့်ရင့်၊ အပွင့်နှင့် အသီးတို ့ကို နေပူပူ တွင် အခြောက်လှန်း ပြီးလက်ဖက်ရည်ကြမ်း လုပ်သောက်ကြပါသည်။ အသားထူသည့် အနီရောင်ချဉ်ပေါင်ဖူးတို ့ကို လည်း ကြော်၍သော်လည်းကောင်း၊ ချဉ်ရည်ဟင်းအဖြစ်လဲချက်စားနိုင်ပါသည်။ ထို ့ပြင် ချဉ်ပေါင်ဖူးနှင့် ချဉ်ပေါင်ပွင့်တို ့ကိို […]
သင့် အသည်း ကို သဘာဝ အတိုင်း ဆေးကြောပေးမယ့် အစားအစာများ
အသည်းက ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ အင်္ဂါတွေထဲမှာ အရေးကြီး အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းက သွေးထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မကောင်းတဲ့ ဗားရက်စ်နဲ့ ဘက်တီးရီးယားများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး နာတာရှည်ရောဂါတွေမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးထားတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အသည်းကို အဆိပ်အတောက်တွေကနေ ကင်းရှင်းပြီး ဆေးကြောနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်း ဆေးကြောနိုင်တဲ့ အစားအစာများကို ဝေမျှပေးပါမယ်။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းက အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထဲမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် သူ့မှာ […]